गाउँपालिकाबाट सहयोग चाहियो भन्न केहि आएको छैन-अध्यक्ष यादव::Best News Experience from Nepal
स्थानीय निकायका काम कारबाही, विकास निर्माणका गतिविधिहरु के भइरहेका छन् । सरकारले भने जस्तै सिंहदबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ त । अखबार न्यूजको स्थानीयनिकायका गतिविधिमा रोहीणी गाउँपालिकाले के-कस्ता गतिविधिहरु गरेको छ यादव भुसालले गरेको कुराकानी । – स
सनोज कुमार यादव
तपाई निर्वाचीत भएपछि रोहिणी गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कुन कुन कामलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
विकास निर्माणका स्तरबाट हेर्ने हो भने रोहिणी गाउँ पालिका पिछडीएको गाउँपालिका हो । यहाँका ५ बटा वडाहरु छिमेकी राष्ट्र भारत संग जोडिएका छन् ।
यहाँ विकसित कुनै गाउँ छैन । हामि चुनावको समयमा गाउँमा घुम्दा बाटो नै प्रमुख समस्या रहेको पायौ । कुनै पनि ठाउँमा यातायातका साधन पुग्न सक्ने अवस्था थियन । हामि असार महिनामा निर्वाचीत भए संगै हामिले सबै भन्दा पहिले बाटोलाई सृद्धढ गर्ने योजना प्राथमिकतामा राखेका थियौ ।
त्यसैले पहिलो दुई बर्षको बजेट बाटोकैलागि छुट्टाएका थियौ । अहिले हरेक गाउँमा जाने बाटो हेर्ने हो भने लगभग सुधार को अवस्था छ, बर्षायाममा पनि गाडी गाउँ गाउँमा पुर्याउन कुनै समसया अहिले छैन ।
सडक निर्माणलागी मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु भो,अन्य क्षेत्रको विकासका लागी के गर्नु भो ?
विकास त सबै क्षेत्रको भएकै छ । सडक निर्माणमा हामीले प्राथमिकता दिएको कुरा चाहि हो । सडक निर्माणको कार्यपछि हामीले कृषीलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढीरहेका छौ । यहाँका ९० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन्,तर व्यवसायीक कृषि गर्ने तरिका थाहा छैन । बर्षमा दुई महिना मात्रै काम गर्ने अन्य समयमा यत्तिकै विताउने अवस्था छ । जसले गर्दा हामिले कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर बेमौसमी तथा नगदे बालि उत्पादन गर्नकोलागि प्रोत्साहित गरदै छौ । जसको लागि विउ विजन स्प्रे,टंकी र बोरिङ्ग जस्ता कृषि उपयोगी सामाग्री उपलब्ध गराएका छौ । हामिले सामुहिक खेती गर्नकालागी आवाहान गरिरहेका छौ ।
सामुहिक तरकारी खेती,सामुहिक माछा पालन तथा गाई पालनमा गाउँपालिकाबाट अनुदान र अन्य सहयोगहरु उपलब्ध गराउने भनेका छौ ।
कृषिमा आम समुदायको सहभागिता बनाउनकालागी हामीले जनचेतना मुलक कार्यक्रम अगाडी बढाइ रहेका छौ । तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ अहिले सम्म सामुहिक कृषि गर्छैै गाउँपालिकाबाट सहयोग चाहियो भन्न केहि आएको छैन ।
सडक र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ? यो गाउँपालिका यहाँको कार्यकालमा कस्तो बन्ने छ ?
सबै भन्दा पहिले हामिले यहाँका उत्पादन देखी लिएर बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु युवतिहरुलाई स्थानिय स्तरबाटै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य राखेका छौ । गाउँपालिकामा यहिको उत्पादनले पुरा गर्ने गरी एवंम प्रकारले बैदेशिक रोजगारमा जाने युवा युवतीलाई आफ्नै ठाउँमा उत्पादन क्षेत्रमा जोडेर यस गाउँपालिकालाई मात्रै नभई सिगौ जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई स्वच्छ शान्त र हराभरा गाउँपालिका बनाउने हाम्रो योजना छ । कृषिमा विशेष पहिचान बनाउने उद्देश्य लिएका छौ । त्यस्तै गरि शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि त्यत्तिकै भुमिका खेलेका छौ । अहिले भर्खरै हाम्रो गाउँपालिकामा हामिले सिभिल इन्जिनियरका कक्षाहरु पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौ । विशेषत हामी कृषिमा पहिचान बनाउनको लागी अग्रसर छौ । रोहिणी नदि र तुरिया खोला दुईले नै छोएको छ । त्यहाँ तरकारी खेतीको लागी उपयुक्त माटो पनि रहेको छ । त्यसकाकारण यस गाउँपालिकाका मान्छे आफै आत्मनिर्भर बनोस भन्ने मेरो सोचाई छ ।
तपाई कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दै हुनूहुन्छ ? कृषकहरु मल नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् ?
अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने मलको अभाव देशव्यापी छ किन भने प्रदेश सरकारको कार्य विधि देखी लिएर अन्य कानुन बनाउन समय लाग्यो, अझै पनि प्रदेश सरकारले धेरै कार्य विधि र कानुन बनाउन बाँकि छ । यसको प्रभाव सिधै कृषी क्षेत्रमा देखीएको छ । किन भने जव निगमले मल मगाउनकोलागी जुन महिनामा टेन्डर गर्छ त्यो टेन्डर गर्दा प्रदेश सरकारको नियमवाली अन्तरगत गर्ने भनीएपछि अलि ढीला भएको हो । तर यो अवस्थामा सधै यस्तै रहन्छ भन्ने छैन । अहिले तिनैवटा सरकार संघिय संरचनाअनुसार नै चलिरहेका छन् । मलाई आशा को साथै विश्वास पनि छ कि अव आउने दिनमा यो समस्याको समाधान हुन्छ । यस विषयमा हामिले सम्बन्धित निकाय सग धेरै कुरा गर्यो जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश सरकार तथा कृषि मन्त्रालय सबै संग छलफल गर्यो छलफल गर्दा यो समस्या देशव्यापी नै हो कुनै पनि प्रदेशले यो कार्य छिटो गर्ने सकेन त्यसकारण यो समस्या आएको हो । आउने दिन यस्ता समस्या आउने छैन भन्ने आश्वासन पाएका छौ । टेन्डर प्रक्रिया गराइसकेपछि प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कार्यविधि बनाउदाँ गाउँपालिकाले पनि आफ्नोलागी चाहिने मल आफै खरिद गर्न खालको ऐन बनाउदै छ भन्ने सुनेको छु त्यस्तो भएमा यो समस्या पुर्ण रुपमा निवाकरण गर्न सकिन्छ ।
विकास निर्माणमा बार्षिक कति बजेट विनियोजीत गर्नु भएको छ ? यहाँको आर्थिक श्रोत कति छ ?
यस गाउपालिकामा आन्तरिक स्रोत भनेको रोहिणी खोला हो । तर त्यो पनि टेन्डर भएको छैन आउने बर्ष हुने क्रममा छ । त्यहाँ पनि बालुवा गिट्टी नभएर माटो मात्रै निस्कन्छ । त्यसबाहेक अन्य स्रोत भनेको बडा कार्यलयहरुले गाउँपालिकाले उठाउँने करबाट प्राप्त रकम हो । अन्य हेर्ने हो भने व्यवसायिलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने प्रयासमा छौ । यस गाउँपालिकामा चालु आर्थिक बर्षको बजेट २४ करोड ४० लाख छ । त्यसमा योजना तर्फ १२ करोड ८१ लाख मात्रै छ । यसमा हामि काम गरिरहेका छौ काम गर्नेसिलसिलामा पनि बिचमा कार्यकारी नभएर केहि अफ्ठारो परेको थियो । तर पनि हामि ८० प्रतिसर भन्दा बढी काम गरिसकेका छौ । मलाई लाग्छ ९५ प्रतिसत भन्दा बढी काम हुन्छ, बजेट फ्रिज हुने अवस्था आउन दिने छैनौ ।
शैक्षिक क्षेत्रको विकासकालागी के कस्ता कामहरु गर्नु भएको छ ?
शैक्षिक क्षेत्रको विकासकालागी पनि हामीले धेरै योजना बनाएका छौ । समग्रमा भन्दा आगामी बर्ष देखि शिक्षा र कृषिक्षेत्र हाम्रो उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र हुने छ । साथै त्यसमा स्वास्थ्य पनि समावेश गरिन्छ । यहाँ अहिले शिक्षामा हेर्ने हो भने १३ बटा मदरासा र १५ बटा मावि र उमावि रहेका छन् । शिक्षकको दरवन्दि धेरै खालि छ । प्राविको शिक्षकले मा.वि चलाउने अवस्था छ । हामिले केहि अस्थायी शिक्षक राखेका छौ । उहाँहरुबाट सेबा मात्र दिन सकेका छौ जिम्मवारी दिन सकेका छैनौ । अब हामिले शिक्षक पुरा गर्ने पहिलो लक्ष्य छ । हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन सहित ड्रेस वितरण पुस्तक वितरण जस्ता कार्यहरु गरिरहेका छौ । महत्वपुर्ण कुरा के छ भने हामीले सिभिल इन्जिनियरको कक्षाहरु संचालन गर्न सफल भएका छौ ।
अहिले सम्म गरेका कुन कुन काममा तपाई बढि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मेरो झण्डै दुई बर्षको कार्यकालमा गरेका सबैकामहरुबाट म सन्तुष्टनै छु यद्यापी मलाई बढि आन्नदआएको काम भने जाडो महिनामा बृद्ध बृद्धा आमा बुवाहरुलाई कम्मल बाढ्ने अवसर भयो त्यस्तै एसिईमा पास हुने विद्यार्थीहरुलाई साइकल वितरण गरे, अहिले उच्च मा.वि.बाट राम्रो अंक ल्याउने बहिनीलाई ल्यापटप दिने अवसर मिल्यो यस्ता कामबाट म अलि बढि खुसि बनेको छु ।
भुसाल रुपन्देहीका संवाददाता हुन् ।